ပုဂံဒေသကို ယူနက်စကိုမှ လာရောက် စစ်ဆေးမည်၊ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များကို ထိခိုက်စေမည့် အပြုအမ?? - Yangon Media Group
ပုဂံဒေသကို ယူနက်စကိုမှ လာရောက် စစ်ဆေးမည်၊ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များကို ထိခိုက်စေမည့် အပြုအမ??
ပုဂံဒေသကို ဇွန်လနှင့် စက်တင်ဘာလအတွင်း ယူနက်စကိုမှစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်များ လာရောက်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်၍ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကိုထိခိုက်စေမည့်အလုပ်မျိုး၊ အပြုအမူမျိုးကို ပုဂံ ဒေသခံများနှင့် ဧည်သည့်များအနေဖြင့်မပြုလုပ်ဘဲ ပုဂံ ဒေသတွင်လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်းများကို လိုက်နာနေထိုင်သင့်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအချက်များကိုမလိုက်နာပါက ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်ရန်ခက်ခဲသွားမည်ဟု မေ ၁၃ ရက်က အမျိုးသားပြတိုက်(ရန်ကုန်)တွင်ကျင်းပသည့် ‘နှလုံးသားထဲက ပုဂံ’ဓာတ်ပုံပြပွဲသို့တက်ရောက်လာသည့် ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန် ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသိန်းလွင်က ပြောသည်။ ”ယူနက်စကိုက စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ ICOMOS အဖွဲ့တွေမလာခင် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုထိခိုက်စေမယ့်အလုပ်၊ အပြုအမူမျိုး ဒါမျိုးတွေမလုပ်သင့်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ICOMOS အဖွဲ့က မိမိတို့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကို မိမိတို့ နိုင်ငံသားတွေက မထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးလား။ အဲဒီလိုမျိုးအပြောခံရမှာ ဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် တင်သွင်းတဲ့နေရာမှာလည်း ပုဂံကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဖြစ်ဖို့ အပြစ်ဖြစ်စေမှာပေါ့။ အဲဒါဆိုရင် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်မဖြစ်ဘူးပေါ့။ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ဖြစ်ဖို့အတွက် ဒေသခံပြည်သူတွေရော၊ ပုဂံဒေသကိုလာ ရောက်မယ့်ဧည့်သည်တွေပါ အကုန်လုံးမိမိတို့ရဲ့ ပုဂံဒေသမှာလိုက်နာရမယ့် စည်းကမ်းစည်းမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာ ပြီးတော့ ပုဂံကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဖြစ်ဖို့ ဝိုင်းဝန်းကူညီ စေချင်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ပုဂံဒေသကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှစတင်၍ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်အောင်ကြိုးပမ်းနေပြီး အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းပြီးနောက် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် ယူနက်စကိုမှ စစ်ဆေး ရေးအဖွဲ့ဝင်များ လာရောက်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။ ”၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လနဲ့ စက်တင်ဘာကြားမှာလာမယ်လို့ပြောပါတယ်။ လာရင် ကျွန်တော်တို့ ဌာနကိုအ ကြောင်းကြားမယ်ပြောပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ ငလျင်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ဘုရားတွေကို ရှေးမူမပျက်မွမ်းမံနေပါတယ်။ ဘုရား ၃ဝဝ ကျော် ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားတွေထဲမှာ ရေရှည်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ့် ဘုရားတွေ အများကြီးပါပါတယ်”ဟု ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန(ပုဂံဌာနခွဲ)မှ ညွှန် ကြားရေးမှူး ဦးအောင်အောင်ကျော်က ပြောသည်။
‘နှလုံးသားထဲကပုဂံ’ပြပွဲစီစဉ်သူ ဒီဇိုင်းမျိုးဆွေသန်းကလည်း ”သူတို့ကလာရင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၂ နိုင်ငံကအဖွဲ့ ဝင်တွေလာကြမှာ။ သူတို့က မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထဲက လမ်းဘေးကသူပဲဖြစ်ဖြစ် မေးကြမှာ။ ပုဂံကို သိသလား။ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းတင်သွင်းမှာသိသလား။ အမွေ အနှစ်စာရင်းဝင်စေချင်သလားလို့လည်းမေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတွေက ဒီအချက်တွေ ကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေရှိနေဖို့လိုပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ ပုဂံဒေသကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းတင်သွင်းသော်လည်း ဥပဒေလိုအပ်ချက်များ၊ ဇုန်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ရေရှည်စီမံခန့်ခွဲထိန်းသိမ်းနိုင်မှုများ လိုအပ်သောကြောင့် အမွေအနှစ်စာရင်းမဝင်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ယင်းလိုအပ်ချက်များကိုပြင်ဆင်ကာ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် အဆိုပြုစာတွဲများအပြီးတင်ကာ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းထပ်မံတင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဗြိတိန်နှင့် ဥရောပတွင် နှုတ်ဆက်ဖျော်ဖြေပွဲများ ကျင်းပမည့် Slayer အဖွဲ့
မြို့တွင်း ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် မူဆယ်ကုန်သည်များ စိုးရိမ်မှု ရှိသော်လည်း နယ်စပ်ကုန်သွယ?
အမေရိကန် အနောက်မြောက်ဘက်၌ နှင်းမုန်တိုင်း ဆက်လက်တိုက်ခတ်၊ ဟာဝိုင်အီကျွန်း အထိပါ တိုက်ခတ်ေ
၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်သန်းခေါင်စာရင်း အောင်မြင်စွာကောက်ယူနိုင်ရေးအတွက် မြေပုံ UPDATE ကို လက်တွေ့ကွင်းဆင်းကောက်ယူနေ
လယ်ယာကဏ္ဍ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး စီမံကိန်းအတွက် ပြင်သစ်အေဂျင်စီမှ ယူရို ၂၅ သန်းချေးယူမည??